Taxanaheena ugu dambeeyay ee mashiinnada goynta laser CO2 ee fidsan waxaa loogu talagalay inay noqdaan qaab weyn, xawaare sare, saxnaan sare iyo otomaatig sare.
Nidaamyada farsamada ee hogaaminaya warshadaha, nidaamyada wadada indhaha, iyo nidaamyada xakamaynta waxay hubinayaan xawaaraha sare iyo xasilloonida sare ee mashiinnada goynta laser-ka. Qalabka Gear & rack gawaadhida iyo mootooyinka adeegga waxay bixiyaan dhaqdhaqaaqyo sax ah oo gaaraya illaa 8000mm / s2 dardargelinta.
Noocyo kala duwan oo qaab shaqo ah ayaa la heli karaa, kuwaas oo si wax ku ool ah ugu habboonaan kara baahida wax-qabad ee warshado kala duwan iyo tilmaamo. Oo weliba waxaannu astaysto qaab goynta ku habboon baahiyaha wax soo saarka gaarka ah.
CO2 tuubada laser galaas DC ama RF biibiilaha biraha RF waa ikhtiyaar sida waafaqsan shuruudaha warshadaha iyo habaynta. Mashiinnada goynta laser-ka ee CO2 oo laalaabsaday waxaa lagu qalabeyn karaa 80 watts, 130 watts, 150 watts, 200 watts, 300 watts, 600 watts, 800 watts iyo xitaa laser-ka CO2 ee awoodda sare leh.
Mashiinka Jarida Laser-Airbag-ka oo leh lakab-kala-goysyo dhowr lakab ah
Xalalka Goldenlaser ee loogu talagalay goynta leysarka airbag-ga ayaa hubinaya tayada, badbaadada iyo keydinta, ka jawaab celinta kororka iyo kala duwanaanta barkadaha shilka ee looga baahan yahay heerarka amniga ee cusub.
CO2 Laser magaabay for darafta Heat yaraynta Ilaalinta darafta
Mashiinka leysarka qaata gaar ahaan dharka kuleylka leh ee xirxiraya ilaalinta ee ka samaysan PET (polyester) fiilooyinka maroojinta iyo yaraynta fiilooyinka polyolefin. No fraying of geesaha goynta ay sabab u tahay goynta laser casriga ah.
Sariir Goynta Dheeraad ah - Gaarka ah 6 Mitiro ilaa 13 Mitir oo cabirro sariiro ah oo loogu talagalay qalab dheeri ah oo dheeri ah, sida teendhada, dharka dhogorta, baarashuudka, paraglider, daar, marquee, shiraac, parasail, sunshade, rooga duulimaadka viation
Mashiinka Mashiinka Mashiinka CO2 ee Dharka Farsamada
Mashiinka goynta laser-ka ee lagu xiro qalabka & rackku waa ku filan yahay inuu qaado awood sare COB laser. Waxay ogaaneysaa xawaaraha xawaaraha sare ee sarreeya iyo jarista xawaaraha leh duulaya.
Mashiinka goynta leyska rooga ee aan-tolmo lahayn, polypropylene fiber, dhar isku dhafan, leatherette iyo gogosha roogag badan. Miiska xamuulka qaada oo ay ku jiraan quudinta baabuurta. goyn degdeg ah oo joogto ah.
Mashiinka mashiinka gooyaa wuxuu ku habboon yahay goynta noocyo kala duwan oo jilicsan oo ay ka mid yihiin dharka, gaskooyinka, dharka kuleylka kuleylka, iyo dharka farsamada ee loogu talagalay codsiyada kala duwan ee ka imanaya warshadaha sifeynta ilaa warshadaha baabuurta iyo militariga.